10 taona taty aorian’ny nahafatesan’i Michael Jackson dia mbola manenjika azy foana ny fanodinkodinana zaza
1. tsy ampy taona niampangana azy hatramin’ny fahavelony. Nanambara mantsy ny « Festival de Sundance » fa hisy ny horonan-tsary fanadihadiana mitondra ny lohateny hoe « Leaving Neverland »
izay halefa tsy ho ela, mandritra ny fihaonana natokana ho an’ny horonan-tsary. Horonan-tsary hiresaka momba ny fiainana lehilahy roa izay nitantara fa nampiharan’i Michael Jackson herisetra ara-pananahana, raha vao 7 sy 10 taona monja. Mahagaga nefa ny hahafahan’ireo mpamokatra horonan-tsary mamoaka ity fanadihadiana ity nefa fanamelohana efa ela be tany no sady efa nikatona no mbola ho fohazin’izy ireo indray.
2. Efa 76 taona i Chantal Goya, amin’izao fotoana. Hiverina an-tsehatra indray izy, ny 2 sy 3 febroary ho avy izao ao amin’ny lapan’ny kaongresy ao Parisy. Izy no milalao ny anjara asa fototra ao anatin’ilay “comédie musicale” mitondra ny lohateny hoe “Le soulier qui vole”, izay noforonin’i Jean Jacques Debout, tamin’ny taona 1980. Miaraka mandray anjara aminy, ao anatin’izany ireo mpilalao malaza indrindra any anaty sary miaina toa an-dry Becassine. Na dia efa lehibe aza i Chantal Goya dia mbola mankafy mizara hafaliana amin’ireo ankizy ihany ka namerina hilalao ity “comédie musicale” ity indray.
3. Valo volana taorian’ny mariaziny niaraka tamin’ny printsy Harry dia fantatra fa nahazo asa efatra i Meghan Markle. Voatendry ho reny mpiahy ny “Royal National Theatre” izy. Andraikitra tokony mbola tsy nambara ofisialy saingy nivoaka 24 ora mialoha indray noho ny hadisoana tao amin’ireo tomponandraikitra tao an-dapa ihany. Araka ny fantatra dia toa efa natao hifandray amin’ny toetrany sy ny zavatra tiany mihitsy ity andraikitra napetraka taminy ity ka efa vonona tanteraka ny amin’izany i Meghan Markle.
4. Tsy miaina malalaka ny fiainany intsony ireo olo-malaza noho ireo “paparazzi”. Nangataka ny amin’ny hamelana azy hitazona ny fiainany manokana nefa i Diane Kruger raha nahita ny sariny, niaraka tamin-janany nivoaka tany anaty aterineto. Nangataka ihany koa izy ireo ny amin’ny hanafoanana izany sary izany mba ho fiarovana ny zanak’izy ireo sy hitandroana ny filaminan’ny fiainan’izy ireo manokana ihany. Vidiana lafo moa ny sarin’ireo olo-malaza any an-toerana ka izany no mahatonga ireo “paparazzi” tsy hionona mihitsy na misy fanenjehina azy ireo aza